RASMI: Man City oo dhameystirtay heshiiskeedii rikoorka ahaa ee Rodri ay kaga soo qaadatay kooxda Atlético Madrid… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Man City oo dhameystirtay heshiiskeedii rikoorka ahaa ee Rodri ay kaga soo qaadatay kooxda Atlético Madrid… + SAWIRRO
(England) 4 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xaqiijisay saxiixa ciyaaryahan Rodri, kaasoo ay kala soo wareegeen Atlético Madrid.
Rodri ayaa maanta kooxda Man City ugu biiray adduun dhan 63 milyan oo ginni waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas 5 sanadood ah.
Laacibkan khadka dhexe ayaa noqday saxiixa labaad ee Manchester City xagaagan, kaddib markii ay kooxda ka dhisan Eitahad Stadium ay bixisay, lacagaha lagu burburin karay qandaraaska uu ku joogay garoonka Wanda Metropolitano.
Qiimaha heshiiskan ayaa ka dhigaaya isaga saxiixa ugu qaalisan taariikhda kooxda Manchester City.
Man City ayaa ciyaaryahan Rodri u aragta badalka waqtiga dheer ee Fernandinho oo sii duqoobaya.
23 jirkan ayaa qiray inuu sugi la’ayahay inuu la shaqeeyo xiddigaha kooxdiisa cusub ee Manchester City.
Rodri ayaa ka soo aflaxay akaadiimayada Atlético Madrid, wuxuuna xirfadiisa ku soo hormariyay kooxda Villarreal, kahor inta uusan markale dib ugu soo laabanin naadiga Atlético Madrid, wuxuu u ciyaaray 84 kulan saddex xili ciyaareed uu ku sugnaa Madrid, waxaana uu kula guuleystay UEFA Super Cup, isagoo sidoo kale xulkiisa qaranka Spain u saftay 6 kulan.
Kooxda Manchester City oo xaqiijisay lambarka uu u xiran doono xiddeeda cusub ee Rodri... + SAWIRRO